musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Cambodia Kuputsa Nhau » Nzira yekushanyira Cambodia zvakare?
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Cambodia Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Health News • nhau • Kuvakazve • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Nyika iri kuvhura zvishoma nezvishoma nzvimbo dzekushanya munzvimbo dzese dzepasi. Kuvhurazve kwakanangana nevashanyi vakabayiwa zvizere. Cambodia ndiyo nyika yazvino kuita chiziviso chakadaro neSvondo.
Bazi rezvehutano reCambodia muna Mbudzi 14, 2021, richangoburitsa pepanhau repamutemo richisimbisa kuti hapana chinodiwa chekuvharirwa kune vafambi vanobaiwa zvizere.
Mune chirevo, Ministry of Health yakawedzera kuti kunyangwe pasina chinodiwa kubayiwa, pane chisungo chekutora samples kubva kune vanouya vafambi vachishandisa yekukurumidza bvunzo michina.
Chirevo ichi chakajekesawo kuti, kune avo vasina kubaiwa, mazuva gumi nemana ekuvharirwa uye PCR sampling, pasina zvakakosha kune avo vakatobaiwa.
Bazi rezvehutano rakaburitsa kuburitswa kwenhau zvichitevera danho reMutungamiriri Hun Sen kuburikidza neshoko rezwi rekugumisa zvinodiwa zvekugara vega veCambodia kune vari kuuya, vakabayiwa zvizere vafambi.
Ministry of Health yakawedzera kuti vafambi vakabaiwa nhomba uye pari zvino vakavharirwa munzvimbo dzinochengeterwa vanhu, mahotera nedzimba munyika yese uye vasina hutachiona hweCCIDID-19 vachabvumidzwa kubva muhusungwa kubva musi wa15 Mbudzi 2021 zvichienda mberi. .
Shanduro isiri yepamutemo yezvitsva zvinodiwa iri pazasi:
Mvumo yevafambi vakabaiwa zvizere kurwisa COVID-19 kuti vapinde muCambodia pasina kudiwa kwekuvharirwa.
1. Vapfuuri vakabaiwa zvizere nhomba yeCOVID-19 uye vanouya kuCambodia nemhepo, gungwa, uye nenyika vanofanira kuuya:
- Chitupa Chekudzivirira, chinosimbisa kuvharirwa kweCCIDID-19, dhamu rakazara uye chitupa.
- Muedzo weCCIDID-19 (PCR) unoshanda kwemaawa makumi manomwe nemaviri wakawanikwa usati wasvika muCambodia, unozivikanwa nevakuru vehutano hwenyika inobatwa.
Pakusvika muCambodia, vafambi vanofanirwa kutora bvunzo nekukurumidza (Rapid Test) COVID-19 pamusuwo wenyika uye vamirire mhinduro dzebvunzo kwemaminetsi gumi nemashanu kusvika makumi maviri.
Mushure mekugamuchira mhinduro isina kunaka yeCCIDID-19, munhu anokwanisa kufamba akasununguka muCambodia yese, zvisinei nedunhu kana purovhinzi, uye haafanirwe kugariswa.
2. Kune vafambi vasina kubaiwa nhomba yeCOVID-19 uye vachienda kuCambodia, vanofanirwa kupasa bvunzo dzeCCIDID-19 nemuchina wePCR uye kuvharirwa kwemazuva gumi nemana zvichiteerana nematanho ari kushanda.
3. Vapfuuri vakabaiwa nhomba yakakwana yeCOVID-19 uye parizvino vari kubayiwa nhomba munzvimbo dzese dzekubaira, mahotera nedzimba munyika yese uye vasina hutachiona hweCOVID-19 vachabvumidzwa kubuda kwavo voga kubva muna Mbudzi 15. 2021 zvichienda mberi.
Mamwe ruzivo nezve Tourism muCambodia.